तातो वा चिसो पानी, स्वास्थ्यको लागी कुन ठिक ?
Monday, 23 Apr, 2018 8:55 AM
पानी हाम्रो दैनिक उपयोगी तथा अपरिहार्य चिज हो । पानी बिना जिन्दगीको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । हाम्रो शरिरको ७० प्रतिशत भाग पानीबाट बनेको हुन्छ । तपाइले पानी पिउने समयमा पानीको तापक्रममा कत्तिको ध्यान दिनुहुन्छ ? ? हामीमध्ये धेरै चिसो पानी पिउछौँ, के यो स्वास्थ्यको लागी फाइदाजनक छ ?
एक हेल्थ म्यागजिनमा प्रकाशित भएको रिपोर्टका अनुसार ८० देखि १०६ डिग्री फरेनहाइट सम्मको पानी शरिरको लागी हानिकारक हुन्छ । यसले गर्दा तपाई बिरामी हुन सक्नुहुन्छ । चिसो पानीको कारण इम्युन सिस्टमको कार्यक्षमता कम हुन्छ । चिसो पानी पिउनाले धेरै मात्रामा म्यूकसको उत्पादन हुन्छ । जुन स्वास्थ्यको लागी हानीकारक छ । अर्को एक रिपोर्टका अनुसार चिसो पानी पिउनाले रक्त कोशिकाहरु साना हुन्छन् । यसले राम्रोसँग खानालाई अबशोषित गर्ने क्षमता कम हुन्छ ।
तातो पानी पिउनुको फाइदा
चिसो पानी पिउनु स्वास्थ्यको लागी हानिकारक हुन्छ । यसकारण हामी तपाईलाई तातो पानी पिउनुको फाइदाको बारेमा बताउन गइरहेका छौँ ।
तातो पानी पिउनाले पाउन प्रणालीलाई राम्रो बनाउँछ । तातो पानीले पेटमा खानालाई पचाउनमा सहयोग गर्छ । यदि खाना खाएपछि चिसो पानी पिउने हो भने पेटमा खाना पच्नमा समस्या हुन सक्छ ।
पेट दुखाइबाट मुक्ति
यदि तपाईलाई पेटसँग सम्बन्धित कुनै रोग वा पेटको दुखाई छ भने तपाईले दैनिक तातो पानी पिउनुपर्छ ।
शरिरमा रहेका बिषाक्त पदार्थको कारणबाट छाला उमेरभन्दा बुढो देखिन्छ । तातो पानी पिएर तपाई यस प्रकियालाई रोक्न सक्नुहुन्छ । तातो पानीले छालामा लचिलोपन ल्याउँछ । बिशेषगरि महिलाहरुको लागी तातो पानीले बिशेष फाइदा दिन्छ ।
तनावको स्तरमा कमी
तातो पानीले नर्भस सिस्टममा सिधै असर पर्छ । तातो पानीले छटपटी अनी तनाव कम गर्नमा सहयोग गर्छ ।
आँतमा जमेको मललाई तातो पानीबाट बाहिर निकाल्न सकिन्छ । दैनिक तातो पानी पिउनाले कब्जियतको समस्याबाट मुतm हुन सकिन्छ ।
तातो पानीले शरिरलाई हाइड्रेट राख्छ । तपाई आफ्नो नियमित डाइटमा ९ देखि १२ डोज सम्म पानी समाबेश गर्न सक्नुहुन्छ । शरिरका सबै अंगले राम्रोसँग कार्य गर्नको लागी पर्याप्त मात्रामा पानीको आवश्यकता हुन्छ । तातो पानीले राम्रो तरिकाले अंगहरुले काम गर्न सक्छन् ।
तातो पानीले शरिरको तौल कम गर्नमा सहयोग गर्छ । शरिरको तापमानलाई कम गरेर मेटाबोलिज्मलाई सक्रिय बनाउँछ । तातो पानीले आँतको मललाई बाहिर निकालेर शरिरलाई सफा बनाउँछ । साथै तौल कम गर्ने कार्यमा पनि सघाउ पुर्याउँछ ।
बिषाक्त पदार्थलाई बाहिर निकाल्छ
तातो पानी पिउँदा शरिरमा एण्ड्रोक्राइन सिस्टम सक्रिय हुन्छ । शरिरमा पसिना आउन लाग्छ । पसिना द्धारा बिषाक्त पदार्थ बाहिर निस्कन थाल्छ ।